१ महिनामै चुहियो ५० करोडको अस्पताल भवन- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
१ महिनामै चुहियो ५० करोडको अस्पताल भवन
काठमाडौँ — बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले ५० करोड खर्चेर निर्माण गरेको भवन उद्घाटन गरेको एक महिना नपुग्दै चुहिन थालिसकेको छ । ठूलो पानी परेको दिन अस्पताल कर्मचारीलाई चुहिएको पानी सोर्न भ्याइनभ्याइ हुन्छ ।
गत साउन १० मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेको भवन अहिले पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । भवनको माथिल्लो तलाको भित्ता र भुइंँं भने चुहिएको पानीले टाटेपांग्रे भएको छ । विशेषगरी आकस्मिक र ओपीडी सेवा सहज बनाउन निर्माण गरिएको यो भवनमा चुहिने समस्या मात्रै छैन । अत्याधुनिक भनेर निर्माण गरिएको भित्ता कच्चा छन् ।
आधारभूत मापदण्ड नपुर्‍याई भवन निर्माण गरिएको अस्पताल स्रोत बताउँछ । ‘एसी, जेनेरेटर र अन्य उपकरणको मूल्य हेर्दा बजारभाउभन्दा दोब्बर, तेब्बरमा खरिद गरिएको देखिन्छ । ‘जडान गर्ने भनिएका उपकरण आधा मात्रै छन्,’ स्रोत भन्छ । गंगालालको यो नयाँ भवन अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्माको नेतृत्वमा बनेको हो । मापदण्डविपरीत भवन निर्माण विवादमा आएपछि डा. शर्मा र तत्कालीन प्रशासन प्रमुख दीपेन्द्र खड्का, भवन इन्चार्ज राम आचार्य र भवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । यो भवनको संरचना १ महिना नबित्दै बिग्रिएकोमा कर्मचारी र चिकित्सक आक्रोशित छन् ।
यस विषयमा भवन विभाग र इन्जिनियरसँग छलफल गरिरहेको अस्पतलामा निमित्त निर्देशक डा.युवराज लिम्बूले बताए । गंगालालको यो नयाँ भवन निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर प्रदीपकुमार यादव नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीको अभियोग लागेका व्यक्ति हुन् । करिब ३ महिनाअघि उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली ठहर भएपछि आयोगले यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:३१